Soosaarka iyo Alaab-qeybiyaha wax soo saarka muraayadda sumadda jumlada ah | OTAO
Iyadoo la horumarinayo warshadaha casriga ah, taleefannada gacanta ayaa nolosheena maalinlaha ah noogu keenaya mid aad ugu habboon. Isla mar ahaantaana, waqtiga isticmaalka taleefannada gacanta ayaa sii kordhaya, ku dhowaad waqtiga oo dhan oo leh taleefannada gacanta meel kasta. Sababtaas awgeed ayaa ilaalinta taleefanka gacantu uu u noqday bartilmaameed maalinle ah oo aan fiiro gaar ah u leenahay, sidoo kale wuxuu fursad iyo horumarin siiyay kiisaska taleefanka gacanta iyo shaashadda ilaaliyaha
Maaddaama qalabka ilaalinta taleefanka gacantu ay aqbaleen dhammaan da 'kasta iyo kooxaha warshadaha, dadku waxay bilaabaan inay yeeshaan dalab shakhsi ahaaneed, dhiirrigelinta sumadda, ama ka-soocidda wax soo saarka ee alaabada, iyo xitaa dalab been abuur ah. Tusaale ahaan, kiiska taleefanka gacanta wuxuu leeyahay qaabab iyo naqshado kala duwan, tartiib tartiib ahna waxaa jira dalab u dhigma oo loogu talagalay muraayad qabow, marka lagu daro naqshadeynta xirmada iibka.
Waqtigan xaadirka ah, waxaan bilaabaynaa inaan muujinno astaamo ama qaabab kala duwan oo ku saabsan filimka adag.
1. Calaamadda daabacaadda Laser / xariir
Iyadoo loo marayo tiknoolajiyada daabacaadda laser ama xariir, astaanta waxaa si toos ah loogu soo bandhigayaa muraayadda adag.
2. Astaan ​​uumisay
Iyada oo la adeegsanayo tiknoolajiyadda u dhiganta, astaanta waxaa lagu soo bandhigi doonaa muraayadda, ma saameynayso muujinta iyo isticmaalka shaashadda, kaliya waxaa loo marayaa ceeryaamo, faraha, dhidid, ama wasakhda saliidda si loo muujiyo astaanta. ku habboon astaamaha yaryar, iyo ereyada gaagaaban.
3. Diiwaanka Hologram
Astaanta waxaa lagu xardhay muraayadda la shubay markii shaashadda taleefanka ay ifayso, waxay u muuqataa, marka shaashadda la xirayo, waxay ka muuqataa shaashaddaada. Waqtigan xaadirka ah, waxaan sameyn karnaa dhammaan noocyada Logo, qaabab, IP-yo, iyo qoraallo, kuwaas oo aad ugu habboon dhiirrigelinta sumadda, sida hadiyadaha, badeecadaha IP-ga ee madax bannaan, ama horumarinta wax soo saarka sumadda. Isla mar ahaantaana, waxaa loo isticmaali karaa muraayadaha muraayadaha leh ee kala duwan.
Phones Telefoonada gacanta ee iPhone:
● Ipad / Kiniin
Hore: 2.5D Matte Gargaaraha Screen for iPhone 12 taxane
Xiga: Warqad dareemeysa filim loogu talagalay iPad Pro 10.9 ″ oo leh khibrado qoraal oo wanaagsan iyo ilaalinta shaashadda